Ajax, famakafakana ny rafitra fiarovana tsy misy tariby haingana hampihatra | Androidsis
Miguel Gaton | | Fitaovana hafa, fiarovana
Ny fametrahana ny rafitra fiarovanao manokana ho an'ny tranonao na ny orinasa dia mitahiry vola be ankoatra ny fananana tombony azo afaka mampifanaraka azy amin'ny filanao sy ny safidinao. Ajax dia manolotra antsika ny rafitr'izy ireo mifanaraka amin'ireo toetra ireo.
1 Expandable sy customizable
2 Fitaovana Ajax
4 Fandoavana tokana, tsy misy sarany
Expandable sy customizable
Ratsy ny fotoana noho ny tsy fananana rafitra fiarovana ao an-trano, na ny fonenana mahazatra na (mbola ratsy kokoa) ny trano faharoa. Ny safidy haingana dia ny fiantsoana orinasa fiarovana ary hivory ao an-trano izany, saingy midika izany fa tsy maintsy mametra ny tenantsika amin'ny Kit izay atolotray antsika isika na mandoa vola fanampiny amin'ny sarany isam-bolana ho an'ny fanovana rehetra ampianay. Ny safidy hafa iray hafainganam-pandeha dia ny rafitra fiarovana natolotry Ajax antsika.
Ity safidy ity dia azo namboarina tanterakaAzonao atao ny misafidy izay fitaovana tianao hapetraka aloha ao an-tranonao, hanitatra ny fametrahana azy avy eo ary hametahana ny rafitry ny fanirianao nefa tsy tsikaritry ny paosinao. Ary izany rehetra izany dia misy ny traikefa amin'ny marika natokana ho an'ny rafitra fiarovana, izay manolotra antsika ny fampiasa sy ny fitaovana izay tsy takatry ny nofinofy rafitra automatique hafa. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mifehy azy amin'ny finday avo lenta, ahazoana aina.
Mandresy lahatra anao ve ny rafitra fiarovana Ajax? TSARA azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ity rohy ity.
Anisan'ireo fitaovana samihafa azontsika alaina ao amin'ny tranokala Ajax handinika ny iray amin'ireo feno indrindra izahay, izay misy ireto manaraka ireto:
Fiantsonan'ny Hub 2 mandray: io no ivon'ny rafitra iray manontolo, izay ampifandraisina ny sisa amin'ireo fitaovana. Mifandray amin'ny router ao an-trano amin'ny alàlan'ny tariby Ethernet izy io, ary manana ny fahombiazan'ny fiasan'olon-tokana tanteraka noho ny bateria iray manana fahaleovan-tena mandritra ny 16 ora sy toerana misy ny karatra microSIM roa, ka raha mivoaka ny herinaratra dia hitohy hiasa tsy misy olana ny rafitra. .
Kitendry keyboard Wireless: keypad isa mba hahafahana mampihetsika sy manafoana ny rafitra.
Kitapo lavitra SpaceControl hifehezana ny rafitra fanairana sy ny bokotra fanairana tsy misy tariby / bokotra bokotra maranitra Izy io dia manana mode panic sy mode hanaraha-maso ny scenario mandeha ho azy ao an-trano.
Sirenie ao anaty tranoSiren, tsy misy tariby ary mandeha izany rehefa maty ny fanairana.
WindowProtect Window sy Door Sensor mamantatra ny fisokafan'ny varavarankely sy ny varavarana.
MotionCam sensor mihetsika, izay tsy vitan'ny mamantatra ny fihetsiketsehana fa koa maka sary ireo mpiditra an-tsokosoko misy vahaolana 640 × 480.
FireProtect detector ny setroka sy ny hafanana izay hampihetsika ny fanairana raha sendra misy fiakarana tampoka ny mari-pana na ny setroka. Manana ny sirenany manokana izy ka afaka miasa tsy miankina amin'ny rafitra Ajax.
Detector ny famoahana rano apetraka ao amin'ireo toerana mety misy fivoahan'ny rano (eo ambanin'ny milina fanasan-damba, fanasana vilia, fitoeran-drano sns.)
Sokajy Smart Plug, miaraka amin'ireo fiasa mandeha ho azy ao an-trano toy ny mandeha ho azy sy programa, ary afaka manara-maso ny fanjifana angovo amin'ny fitaovana ampifandraisintsika aminy.
Ireo kojakoja rehetra ireo, afa-tsy ny tobin'ny Hub 2, Manana endri-javatra tena ilaina izy ireo: 100% tsy misy tariby. Tsy mila mitady plug akory ianao mba hifanaraka amin'izy ireo, satria samy manana batterie miaraka amin'ny faharetany lava (taona maromaro mihitsy) izy rehetra ary azon'ny mpampiasa soloina soloina ihany koa. Ary tsy mila miahiahy momba ny fifandraisana amin'ny afovoany koa ianao, satria ny fifandraisana "Jeweler" dia mahatratra hatramin'ny 2000 metatra ny fandrakofana, izay mihoatra ny ampy ho an'ny trano sy orinasa rehetra.
Ajax dia mamporisika ireo mpampiasa hisafidy fametrahana matihanina satria izy io dia misoroka ny fampandrenesana diso, miantoka fa voasarona ny làlana miditra rehetra ary manome antoka ny fiasan'ny rafitra tonga lafatra. Raha ny momba anay dia tsy nilaina izany satria manana traikefa amin'ny rafitra fanairana hafa izahay ary afaka namory azy io tsy nisy olana.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mametraka ny rindranasa Android (rohy). Rehefa manokatra ny rindranasa ianao dia azonao atao ny manefy ny base Hub2 ary avy eo ampio tsirairay ny kojakoja tianao hapetraka amin'ny alàlan'ny fanovana ny kaody QR izay misy ny tsirairay avy. Tao anatin'ny minitra vitsy dia hanana ny rafitra iray voalamina sy vonona handeha ianao.
Izy io dia rindranasa tena tsotra hikirakirana, miaraka amina menus tena intuitive ary ahafahanao mahita ny fampahalalana ilaina rehetra nefa tsy mila mivezivezy amin'ny menus be loatra. Izy io koa dia mifangaro amin'ny rafitra famantarana ny findainao finday avo lenta mba hisorohana ny olona tsy hiditra ao. Hohitanao ny toetoetran'ny bateria amin'ny kojakoja rehetra, ny kalitaon'ny fifandraisana sy ny fampandrenesana ny hetsika rehetra izay hitan'ny rafitra. Ao anatin'ny fikirana, ny safidin'ny fikirakirana dia tsy misy farany, afaka mametraka ny haavon'ny fahatsapana an'ireo fitaovana, mametraka programa fandefasana, sns.
Raha te hanampy mpampiasa sasany amin'ilay rindranasa izahay dia azo atao ihany koa ny manome azy. Fandraisana tsy voafetra na vetivety amin'ny fanairana fanaontsika, mety tsara rehefa tonga ao an-trano ny mpianakavy na ny vahiny. Ajax koa dia manana fampahatsiahivana mba hampavitrika na hamono ny fanairana rehefa miala ao an-trano isika na tonga any, izay tsara indrindra mba tsy hitsambikina izy amin'ny maraina rehefa tonga any an-trano ianao rehefa avy misakafo hariva miaraka amin'ny namanao.
Fandoavana tokana, tsy misy sarany
Ity no ampahany tsara indrindra amin'ity rafitra ity: tsy misy sarany miafina isam-bolana. Mividy ny rafitrao ianao, mividy kojakoja tadiavinao, ary eo no mifarana ny fandoavambola. Tsy misy sarany miovaova arakaraka ny isan'ny fitaovana mifandray, na ny fiasa tianao hampidirina.
Na izany na tsy izany, raha tianao ny manakarama rafitra fiarovana fanampiny, Ajax dia manolotra lisitr'ireo orinasa mifanaraka amin'ny rafitr'izy ireo, ao anatin'izany ny malaza any amin'ny firenenao.
Rafitra fiarovana Ajax
Tsy misy sarany isam-bolana
Modular sy namboarina
Tsy mila mametraka tariby
Tsy manana fakantsary amin'ny marika anaovany azy io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Ajax, famakafakana ny rafitra fiarovana tsy misy tariby haingana hampiharina
Wiko Y81: fahan'ny fidirana vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena roa andro
Motorola Razr 5G, finday avo lenta vaovao natomboka manodidina ny 1.500 euro